Mogadishu Journal » Mareykanka oo liiska Argagixisada ku daray Saraakiil Shabaab ah
Mareykanka oo liiska Argagixisada ku daray Saraakiil Shabaab ah
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa Liiska Argagixisada ku dartay laba sarkaal oo ka tirsan xoogaga ururka Al-shabaab.
Labada xubnood ee Mareykanka uu liiska Argagixisada ku daray ayaa waxa ay kala yihiin Axmed Iimaan Cali iyo C/fataax Abuukar Cabdi, oo labaduba ka mid ah saraakiisha Shabaab.
Mareykanka wuxuu sheegay labadan xubnood in ay halis ku yihiin ammaanka muwaadiniinta u dhashay Mareykanka iyo kuwa Gobolka.
Wuxuu sheegay Mareykanka Axmed Iimaan inuu garab weyn ka yahay Shabaabka ku sugan gudaha dalka Kenya, kuwaasi oo mararka qaar weeraro geysta.
Sidoo kale wuxuu sheegay Mareykanka C/fataax Abuukar inuu ka dambeeyay weerar 2014-kii ka dhacay magaalada Mpeketoni ee dalka Kenya, kaasi oo lagu dilay in ka badan 60 qof, oo rayid u badnaa.
Maamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in dad loo soo qabtay dilkii xalay ka dhacay Xamar Weyne